Kedu ka esi meziwanye umuaka ndi okenye m na ebe di elu?
N'ụbọchị anyị, SEO na-arụ ọrụ dị oke mkpa ọ bụla n'ahịa ọ bụla ma ọ bụrụ na ị nwere ụlọ nri nri ma ọ bụ ụlọ ahịa ịzụ ahịa. N'ọnọdụ abụọ ahụ, nzube bụ isi nke onye ọchụnta ego bụ ime ka ndị ọbịa na-adọta ma mee ka ha nweta ego. Ugbu a iji mee ka azụmahịa gị baa ọgaranya, ịkwesịrị itinye ya na ntanetị ma na-ebuli ya dị ka usoro nyocha niile. Ịdị elu ị na-adabere na SERP, ka ị na-enwetakwu ahịa gị.
Nyocha njirimara nke ndị okenye nwere otu ihe dị ka njikarịcha nkịtị na naanị ọdịiche dị na usoro ụlọ njikọ. Uru kasịnụ nke ndị okenye SEO bụ na ị nwere ike ịkwado ebe nrụọrụ weebụ gị na nke a na-adị mfe karị n'ihi obere asọmpi. Jide n'aka na ị nwere ụzọ ị ga-esi na-akwụ ụgwọ okporo ụzọ gị, ebe ọ na-adịghị ọnụ.
Ka anyị tụlee otú ị ga-esi na-ebufe okporo ụzọ okporo ụzọ gị na ndị okenye ma nye ya Google TOP.
Nwepụta okenye SEO
E nwere akụkụ SEO anọ kachasị mkpa nke kachasị mma maka mgbasa ozi ọ bụla yana maka njikarịcha weebụsaịtị kachasị mma: mkpokọta peeji nke, ikike mpaghara, njikwa njikọ aka, mkpa nke njikọ inbound.
Mmetụta nke ibe weebụ na-eje ozi dị ka ihe dị mkpa Google ranking. Ọ na-egosi maka ndị ọrụ abụọ na crawlers weebụ dị mkpa otu ọdịnaya weebụ maka ajụjụ onye ọrụ. Iji mee ka saịtị gị dị mkpa, ịkwesịrị iji bulie ya na ọdịnaya ya. Nke mbụ, ịkwesịrị itinye mkpụrụokwu okwu dị mkpa n'ime ọdịnaya weebụ gị, utu aha, nkọwa na mkpado elu iji hụ na ndị ahịa gị nwere ike ịchọta saịtị gị n'ụzọ dị mfe. Ọzọkwa, ịkwesịrị igbanye ọdịnaya dị mma dị ka o kwere mee. N'ọnọdụ weebụsaịtị ndị toro eto, ị nwere ike ide akụkọ akụkọ na-ebipụta ma na-ebipụta ya kwa izu.
Njikwa ikike bụ ihe ọzọ dị mkpa nke na-ekwu eziokwu ahụ apụghị ime otu ntabi anya. Ọ na ewe oge iji nweta ikikere weebụsaịtị. Iji meziwanye ikike ngalaba gị, ịkwesịrị ileba anya na njirimara njirimara gị ma mepụta mkpọsa ụlọ njikọ. Ọzọkwa, ikike nke ngalaba na-emetụta ọtụtụ ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya dịka ọnụọgụgụ, ntụgharị, oge oge onye ọrụ na-eji na saịtị yana ibiaghachi ọnụego.
Ọzọkwa, ị ga-atụle ikikere nke njikọ njikọ gị dịka ọ bụ isi ihe na-emetụta gị onye okenye SEO. Ịkwesịrị ịtọ njikọ saịtị gị nanị na ngalaba ndị nwere ikikere na ogologo oge nke ndị ọrụ na-atụkwasị obi. Ọ ga - enyere gị aka ịkwanye ebe ị na - eto eto n'ihu nde ndị ọrụ na - akpali akpali. M na-adụ gị ọdụ ka ị chee echiche banyere ọnụọgụ gị dị mkpa nakwa banyere àgwà ha. Ọzọkwa, ị ga-achọ ijide n'aka na ị na-etinye azụlinks gị dị mkpa na mpaghara ahịa gị niche. Dịka ọmụmaatụ, ọ ga-eju anya ma ọ bụrụ na ị tinye njikọ njikọta nke okenye gị na ngalaba na-azụ nri nwa.
Dịka Google anaghị anabata mgbasa ozi PPC maka saịtị ndị okenye, ọ bụ naanị ụzọ isi tinye ego na njikarịcha search engine. Enwere m olileanya na omume kachasị mma m kwuru n'isiokwu a ga-enyere gị aka ịmepụta mgbasa ozi mmeri ma melite SEO okenye gị Source .